bamka waajibka ah NEMA Single Phase ac motors saddex matoor taageere
Soo saaraha Matoorka Korontada
Waxaan leenahay koox R&D xoog leh, waxaanan horumarin karnaa oo soo saari karnaa matoorada Nema ac iyo alaabooyin kale iyadoo loo eegayo sawirada ama muunadaha ay macaamiishu bixiyeen. Badeecadahayaga badidood waxay hore u heleen shahaadada CSA/CUS, UL. Shaybaadhkayagana waxa u qalmay kooxda CSA/UL si ay u tijaabiyaan soo saaraha wttnessed ee barnaamijka shahaado ee ku salaysan ISO/IEC 17025:2005
Hal waji Motor
Waxaan ku takhasusay iibinta matoor hal waji ah iyo tilmaamo kale oo matoorada. Ilaa hadda, Waylead waxay si madax-banaan u samaysay 1/10-20HP, 48-250, 2, 4, 6, 8 tiir, in ka badan 2000 oo nooc oo tayo sare leh, matoor tayo gaar ah leh.
Sida warshada mootooyinka ee wejiga kaliya ee caado u leh, dhammaan matooradayada iyo soo-saareyaasha ganacsigu waxay dhaafeen shahaadada CSA & CUS, matoorada qaarkoodna waxay sidoo kale haystaan ​​shahaadada UL. Tayada goobta iyo wax soo saarka waxaa maamula "6S". Hirgelinta heerarka nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9001.
Saddexda Wejiga Gawaarida
Ilaa hadda, Waylead waxay si madax-banaan u samaysay 1/10-20HP, 48-250, 2, 4, 6, 8 tiir, in ka badan 2000 oo nooc oo tayo sare leh, matoor tayo gaar ah leh. Sida caadada ah ee warshadda mootooyinka saddexda weji ee xirfadleyda ah, dhammaan matooradayada iyo soo-saareyaasha ganacsigu waxay ka gudbeen shahaadada CSA & CUS, matoorada qaarkoodna waxay sidoo kale haystaan ​​shahaadada UL.
Waylead waxay leedahay khibrad horumarineed, wax soo saar, maarayn tayo leh iyo koox adeeg. Waxaan samayn karnaa matoorada "dawaarle-dhigay" iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha kala duwan.
Dhammaan oem 56 Frame Dripproof Saddex-waji Jet Pump Motor iyo soo-saareyaal ganacsi waxay ku aflaxeen shahaadada CSA & CUS, matoorada qaarkoodna waxay sidoo kale haystaan ​​shahaadada UL.
Waxaan samayn karnaa "dawaarle-dhigay" Saddex-waji JM-ku-dhowaad bamka bamka sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha kala duwan. Dhammaan matooradayada waxaa loo dhoofiyaa Maraykanka, Kanada, Mexico, Japan, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, iwm. Matoorada waxaa si weyn loogu isticmaalaa alwaaxyada, kombaresarada hawada, afuufayaasha, marawaxadaha, matoorada biyaha, matoorada Haydarooliga, iwm.
Matoorka biriiga ee saddex-waji ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha kala duwan. Dhammaan matooradayada waxaa loo dhoofiyaa Maraykanka, Kanada, Mexico, Japan, Australia, New Zealand, Saudi Arabia, iwm. Matoorada waxaa si weyn loogu isticmaalaa alwaaxyada, kombaresarada hawada, afuufayaasha, marawaxadaha, matoorada biyaha, matoorada Haydarooliga, iwm.
Waylead waxay ku kasbatay iibsade caalami ah oo caan ah oo tayo sare leh, qiimo macquul ah, keenista wakhtiga iyo adeeg wanaagsan. Waylead waxay rajeyneysaa inay kula shaqeyso mustaqbalka dhow!
Waxaan diirada saareynaa horumarinta alaabada tayada sare leh ee suuqyada dhamaadka-sare.Our custom nema ac motor waxay la jaan qaadayaan heerarka NEMA, waxaana inta badan loo dhoofiyaa USA, CANADA, Mexico, Australia iyo meelo kale oo adduunka ah.
Waxaan leenahay shaybaadhkayaga tijaabada ah iyo qalabka baadhista ugu horumarsan uguna dhamaystiran, kaas oo hubin kara tayada matoorada nema ac.
Waylead Motor Manufacturer, oo ahaa qayb ka mid ah Cixi Huili, ka diiwaan gashan sumadda "WAYLEAD" ee Shiinaha, Kanada iyo USA sanadka 2008. Waylead waa National Hi-Tech Enterprise Private Enterprise oo ku takhasusay cilmi-baarista, horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeeg
Saddex waji oo tayo sare leh iyo hufnaanta sare ee matoorada korantada ayaa shahaado ka helay Waaxda Tamarta ee Kanada iyo US 2007 iyo 2010. Dhammaan matooradayada waxaa loo dhoofiyaa USA, Canada, Mexico, Japan, Australia, New Zealand, Saudi Arabia iyo wixii la mid ah. Matoorada waxaa si weyn loogu isticmaalaa beeraha kala duwan ee warshadaha iyo beeraha sida Woodworker, kombaresarada hawada, afuufiye, Fan, Water Pump, Hydraulic bamka, bamka dhaqidda, Barkad iyo bamka spa, Mashiinka Jalaato, Qalabka dubista iyo albaabka garaashka, iwm.